HESHIIS DHACAY: AC Milan oo dhamaystirtay heshiiska Lucas Biglia (Goorma ayuu caafimaadka marayaa?) – Gool FM
HESHIIS DHACAY: AC Milan oo dhamaystirtay heshiiska Lucas Biglia (Goorma ayuu caafimaadka marayaa?)
(Roma) 13 Luulyo 2017 – AC Milan ayaa heshiis la gaartey laacibka khadka dhexe ee Lazio Lucas Biglia, iyadoo sida uu sheegayo warsidaha Gianluca Di Marzio uu laacibku berri ka tegi doono xerada tababarka Lazio si uu isla galabta berri ah caafimaadka ugu maro Milan.
Waxaa la fahamsan yahay inuu is fahamku yimi kaddib markii ay telefoon ku wada sheekaysteen guddoomiya Aquile jaalle Claudio Lotito iyo dhiggiisa Rossoneri jaalle Marco Fassone.
Xitaa wakiilka laacibka ee Montepaone oo u warramayay #sportitaliamercato ayaa xaqiijiyay inuu heshiis dhacay, isagoo MilanNews.it ku yiri: “Biglia aad buu ugu faraxsan yahay doorashadan, berri ayuuna imanayaa wuuna sugi la’yahay waqtiga”.
ESCLUSIVA – Montepaone, agente di Biglia a #sportitaliamercato conferma: “Con il milan è fatta” #milan #lazio #biglia
— Gianluigi Longari (@Glongari) 13 juli 2017
Laacibkan reer Argentine ayaa kaliya kooxdiisa kula soo biiray Auronzo di Cadore maanta oo Khamiis ahayd, isagoo dalbanayay in la fasoxo.
Biglia oo xagaagii oo idil Milan bartilmaameed u ahaa ayaa la isku mari la’aa Biancocelesti oo dalbanaysay €20m, iyo Milan oo ogolayd €15m balse haatan waxaa lagu dhameeyay €17m iyo bareemiyo.
DEG DEG: Leonardo Bonucci oo soo gaarey Casa Milan & taageerayaal badan oo soo dhoweeyay + Sawirro & Muuqaal